Kalandrie fampisehoana vokatra Apple ho an'ny 2014 | Vaovao IPhone
Kalandrie fampisehoana vokatra Apple ho an'ny 2014
Vaovao IPad | | Apple Watch, iPad, Apple products
Ny sabotsy ho avy izao dia manomboka ny volana martsa ary koa, raha tanteraka ny fanantenana, Fandaharana famoahana an'i Apple ho an'ny 2014. Araka ny tsiliantsofina farany sy fanaraha-maso nataon'ny mpandinika dia mamela anao izahay hanombatombana amin'ny fotoana hahitan'ny vokatra vaovao an'i Apple ny mazava amin'ity taona ity.
1 Martsa aprily
3 Septambra Oktobra
4 Hevitra farany
Amin'ny taona faharoa misesy, lohataona tsy hanomboka amin'ny famoahana maodely iPad vaovao. Fa kosa, Apple dia mety hiseho Apple TV taranaka fahefatra mandritra ireo herinandro ireo. Mampalahelo fa tsy tena mazava tsara hoe inona ireo fiasa vaovao azonao ampiana na rehefa mety hamidy amin'ny besinimaro izy io.
Ny olana amin'ity fitaovana ity dia ny manova ny sehatry ny haino aman-jery audiovisual, izay manomboka ary mifarana amin'ny fanapaha-kevitry ComCast hividy Time Warner Cable, izay nifampiraharaha tamin'i Apple hampiditra ny atiny ao amin'ilay fitaovana vaovao. Apple TV dia tsy tetik'asa be fatratra ao anatin'ny drafitr'i Apple, ka andraso mety ho iTV amin'izao fotoana izao dia toa tsy azo inoana izany.
Ny Kongresin'ny Apple Developers isan-taona (WWDC) dia mety hatao amin'ny volana Jona. Ao Cupertino ampiasao amin'ity volana ity hampiroborobo ireo vokatra izay hiseho amin'ny volana ho avy.
Azo inoana fa mandritra ny WWDC, dia ho hitantsika tokoa fampisehoana ny iOS 8, ary angamba ny mpandimby ny OS X Mavericks. Afaka nahita ny fanavaozana ny vokatra Mac ihany koa izahay.
Nandritra izay roa taona lasa izay, Apple dia nanao hetsika manokana roa. Amin'ny tranga voalohany, Apple dia mety hanambara iPhones roa vaovao, ny iray lehibe noho ny iray hafa ary samy hihama mahia izy roa. Azo inoana koa fa ny iWatch no manao ny debut voalohany nandrasana hatry ny ela.
Amin'ny tranga faharoa dia antenaina ny hahita ny taranaka fahenina an'ny iPad ary ny iPad Mini ny taranaka fahatelo. Na dia misy aza ny tsaho milaza fa tsy hisy iPad Mini vaovao hatramin'ny taona ho avy.
Nandritra ny vanim-potoana Steve Jobs, Tian'i Apple ny gaga tamin'ny fanambaràny ny vokatra iray izay tsy nisy nahalala. Araka ny voalazan'i Cook, Apple dia nanjary orinasa iray, noho izany ny fandefasana fandaharana fampahalalam-baovao sy ny manam-pahaizana ary ny fivoahan'ny mpamatsy, ho lasa orinasa iray hafa, izay nandritra ny fampisehoana ireo vokatra dia tsaho fotsiny no niparitaka momba ilay fitaovana. miandry ny fanamafisana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Kalandrie fampisehoana vokatra Apple ho an'ny 2014
Supergeek dia hoy izy:
Avy amin'ny mini Mac vaovao amin'ny faran'ny volana febroary, azoko fa tsy misy na inona na inona, sa tsy izany?
Mamaly an'i Supergeek
manadala azy ireo! Hatramin'ny volana oktobra lasa teo niaraka tamin'ny honohono diso: tsy miandry ilay mac mini vaovao intsony aho! Hackintosh no ataoko.
Toca Pet Doctor, ilay vaovao avy amin'ny Toca Boca dia misy ao amin'ny App Store
Spin: ny mozika mihodina eo amin'ny efijery hidin-trano (Cydia)